Habka ugu wanaagsan ee wax loo barto – Bogga sheekooyinka
Habka ugu wanaagsan ee wax loo barto
Habka ugu wanaagsan ee wax loo barto, waxa ugu horreeya in marka horeba aas waxbarashadda isku diyaariso, lana timaado shuruudo ku habboon. Shalay dugsigii dhexe iyo kii hooseba masuuliyadda waxbarashaddaada iyo mustaqbalkaagu adiga gacantaada kuma wada jirin, waxaad haysatay kaalmo. Haddii aad xasuusato miiska aad wax ku akhrinayso waa lagaa tirtiri jiray, haddii ay wax kugu adkaadaan waa lagaa caawin jiray, buuqana iyo dhibkana waa lagaa dhowri jiray. Maanta arrinku sidii ma aha. Mas´uuliyaddu adiga ayey gacanta kuugu jirtaa. Baruhu waa iftiimiye waxa uu kuu sheegayaa waa wax kooban oo kaliya. Waalidkaa talo ayuunbaa idinka dhaxaysa. Waxaa lagaa doonayaa marka hore in aad waxbarashadda si fiican ula qabsato, waqti u haysid, niyad adagna la timaado, si wax kasta oo kugu adkaada aad uga natiijo uga keento.
1.	Maxaan halkan u joogaa?
2.	Waa maxay ujeeddada aan ka leeyahay waxbarashaddan?
3.	Waa maxay qorshahayga mustaqbalkeyga?
Habka ugu fiican ee cashar aad akhriday aad u xasuusan karto
1.	Dulmar guud ku same cashirka guud oo aad wada akhrisay.
2.	Dhug u yeelasho oo hoosta ka xariiq meesha muhiimka ah. ( calaamadee)
3.	Kor u akhri oo is maqashii ama qof kale ha kaa dhegeysto, taas micneheedu waa in aad fahantay casharka.
4.	In aad wax ka qorto adigoo soo gaabinaya casharka isla markaasna meel kasta oo aay su´aali ka imaan karto aad qiyaasi karto kana jawaabi karto.